Mateo 6 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
6 “Monhwɛ yiye na moanyɛ mo trenee+ wɔ nnipa anim sɛnea wobehu mo; anyɛ saa a morennya akatua biara mfi mo Agya a ɔwɔ soro no nkyɛn. 2 Enti sɛ worekɔyɛ adɔe+ a, nhyɛn torobɛnto+ nni w’anim, sɛnea nyaatwomfo no yɛ wɔ hyiadan ne mmɔnten so na ama nnipa ahyɛ wɔn anuonyam no. Nokwarem mise mo sɛ, Wɔanya wɔn akatua nyinaa awie. 3 Na wo de, sɛ woreyɛ adɔe a, mma wo nsa benkum nnhu nea wo nsa nifa reyɛ, 4 na ama w’adɔe ayɛ kokoam de; ɛno na w’Agya a ɔrehwɛ wɔ kokoam no betua wo ka.+ 5 “Afei nso sɛ mobɔ mpae a, monnyɛ te sɛ nyaatwomfo no; efisɛ wɔpɛ sɛ wogyina+ hyiadan mu ne mmɔnten ntwea so bɔ mpae sɛnea nnipa behu wɔn.+ Nokwarem mise mo sɛ, wɔanya wɔn akatua nyinaa awie. 6 Nanso wo de, sɛ worebɔ mpae a, kɔ wo pia+ mu na to wo pon mu bɔ w’Agya a ɔwɔ kokoam no mpae;+ ɛno na w’Agya a ɔhwɛ kokoam no betua wo ka. 7 Na sɛ worebɔ mpae a, ntĩ nsɛm koro no ara mu nka no mpɛn pii+ sɛnea amanaman mufo yɛ no, wosusuw sɛ wɔn nsɛm dodow nti wobetie wɔn. 8 Enti monnyɛ sɛ wɔn, efisɛ mo Agya Onyankopɔn nim nneɛma a ehia+ mo koraa ansa na moabisa no. 9 “Enti mommɔ mpae sɛ:+ “‘Yɛn Agya a wowɔ soro, wo din+ ho ntew.+ 10 W’ahenni+ mmra. W’apɛde+ nyɛ hɔ wɔ asase+ so te sɛ ɔsoro. 11 Ma yɛn nnɛ aduan* wɔ da yi mu;+ 12 fa yɛn aka firi yɛn, sɛnea yɛn nso de afiri wɔn a wɔde yɛn aka no.+ 13 Na mfa yɛn nkɔ sɔhwɛ mu,+ na gye yɛn fi ɔbɔnefo no nsam.’+ 14 “Na sɛ mode nkurɔfo mfomso firi wɔn a, mo soro Agya nso de mo de befiri mo;+ 15 sɛ moamfa nkurɔfo mfomso amfiri wɔn a, mo Agya nso remfa mo mfomso mfiri mo.+ 16 “Sɛ moredi mmuada+ a, monnyɛ mo anim bosaa te sɛ nyaatwomfo no, efisɛ wɔyɛ wɔn anim basaa na ama nnipa ahu sɛ wɔredi mmuada.+ Nokwarem mise mo sɛ, wɔanya wɔn akatua nyinaa awie. 17 Na wo de, sɛ woredi mmuada a, sra wo tiri mu ngo na hohoro w’anim,+ 18 na nnipa anhu sɛ woredi mmuada, na mmom w’Agya a ɔwɔ kokoam no;+ ɛno na w’Agya a ɔrehwɛ wɔ kokoam no betua wo ka. 19 “Munnyae ademude+ a mohyehyɛ wɔ asase so no, baabi a nwewee ne nkannare sɛe no, na akorɔmfo bubu kowia. 20 Mmom no, monhyehyɛ mo ademude ɔsoro,+ baabi a nwewee anaa nkannare nsɛe no,+ na akorɔmfo mmubu nkowia. 21 Na baabi a w’ademude wɔ no, ɛhɔ na wo koma nso wɔ. 22 “Nipadua kanea ne aniwa.+ Enti sɛ w’aniwa hwɛ tẽẽ a, wo nipadua nyinaa bɛhyerɛn; 23 nanso sɛ w’aniwa di bɔne akyi*+ a, wo nipadua nyinaa bɛyɛ sum. Na sɛ hann a ɛwɔ wo mu no yɛ sum a, hwɛ sɛnea saa sum no bɛyɛ kɛse!+ 24 “Obiara ntumi nsom awuranom baanu; efisɛ sɛ wantan obiako na wannɔ ɔfoforo+ no a, ɔbɛbata obiako ho na wabu ɔfoforo no animtiaa. Muntumi nsom Onyankopɔn ne Ahonyade.+ 25 “Eyi nti mise mo sɛ: Munnyae sɛ mudwinnwen+ mo kra ho sɛ dɛn na mubedi anaa dɛn na mobɛnom, anaa mo nipadua ho sɛ dɛn na mobɛhyɛ.+ So ɔkra no nhia nsen aduan, na nipadua no nsen atade?+ 26 Monhwɛ ewim nnomaa;+ wongu aba na wontwa na wɔmmoaboa ano ngu asan so, nanso mo soro Agya ma wɔn aduan. So monsom bo pii nsen wɔn?+ 27 Mo mu hena na sɛ odwinnwen a obetumi de basafa biako aka ne nkwa nna ho?+ 28 Bio nso, ɛdefa atade ho no, dɛn nti na mudwinnwen? Monhwɛ wuram sukooko+ nsua biribi, sɛnea enyin; ɛnyɛ adwuma, na ɛnto asaawa; 29 nanso mise mo sɛ, Solomon+ anuonyam nyinaa akyi mpo no, wanhyehyɛ ne ho sɛ eyinom mu biako. 30 Afei sɛ Onyankopɔn hyɛ wuram afifide a ɛwɔ hɔ nnɛ na ɔkyena wɔde agu ogya mu no atade a, so ɔrenhyɛ mo atade mmoro so, mo a mo gyidi sua?+ 31 Enti munnnwinnwen+ nnka sɛ, ‘Dɛn na yebedi?’ anaasɛ, ‘Dɛn na yɛbɛnom?’ anaasɛ, ‘Dɛn na yɛbɛhyɛ?’ 32 Na eyinom nyinaa ne nneɛma a amanaman no di akyi denneennen. Na mo soro Agya nim sɛ muhia saa nneɛma yi nyinaa.+ 33 “Enti, monkɔ so nhwehwɛ ahenni no ne Onyankopɔn trenee+ kan, na ɔde nneɛma a aka yi nyinaa bɛka ho ama mo.+ 34 Munnnwinnwen ɔkyena ho,+ na ɔkyena ankasa benya ne dadwen. Da biara mu bɔne ankasa dɔɔso ma da no.
^ Nea ɛkyerɛ ankasa ne, “paanoo.”
^ Nea ɛkyerɛ ankasa ne, “w’aniwa nye.”